के हो विमानको ब्ल्याक बक्स र दुर्घटनापछि यसलाई किन खोजिन्छ ? - pnpkhabar.com
You are at:Home»समाचार»के हो विमानको ब्ल्याक बक्स र दुर्घटनापछि यसलाई किन खोजिन्छ ?
के हो विमानको ब्ल्याक बक्स र दुर्घटनापछि यसलाई किन खोजिन्छ ?
By रबि धिताल on ३० फाल्गुन २०७४, बुधबार ०१:१९ समाचार
काठमाडौं ,फागुन ३०: सोमबार काठमाडौंमा युएस बंगला एयरको विमान दुर्घटना भएपछि यसको ब्ल्याक बक्सको खोजी भयो । यहाँ मात्र होइन सबै विमान दुर्घटनामा विमानको ब्ल्याक बक्स खोजिन्छ । हरेक विमानमा ब्ल्याक बक्स हुन्छ र दुर्घटनापछि यो ब्ल्याक बक्स अनिवार्य खोजिन्छ । ब्ल्याक बक्स के हो र यसले के काम गर्छ भन्ने बारेमा भने धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ ।
ब्ल्याक बक्स खासमा रेकर्डर हो । यो रेकर्डरमा विमान दुर्घटना हुनुभन्दा अघि २ घण्टाको आवाज रेकर्ड हुन्छ । यसमा विमानभित्रका सबै आवाज रेकर्ड हुन्छन् । विमान जस्तोसुकै दुर्घटनामा परे पनि यो ब्ल्याक बक्स सकुशल रहन्छ र यसमा रेकर्ड भएको आवाजको आधारमा दुर्घटना कसरी भयो भन्ने पत्ता लगाउन सहज हुन्छ । ब्ल्याक बक्सलाई विमानको पछिल्लो भागमा राखिएको हुन्छ । यो बक्स एकदमै बलियो मानिने धातु टाइटेनियमबाट बनेको हुन्छ, जसलाई आगोले जलाउन सक्दैन । यही कारण विमान दुर्घटना हुँदा पनि ब्ल्याक बक्स सुरक्षित रहन्छ । रोचक त के भने ब्ल्याक बक्सको रंग कालो हुँदैन । यो सुन्तला रंगको हुन्छ । एक बैठकमा एक पत्रकारले यो बक्सलाई ‘ब्ल्याक बक्स’ भनेपछि यही नाम प्रचलनमा आएको हो । शायद त्यतिबेला यो बक्स जलेर कालो भएकोले उनले यसो भनेका थिए तर पछि यही नाम नै प्रचलित भयो । यसमा दुईवटा रेकर्डर हुन्छन् । एउटा एफडीआर (फ्लाइट डाटा रेकर्डर) र अर्को सीभीआर (ककपिट भ्वाइस रेकर्डर) । एफर्डआरले विमानको उडानसम्बन्धी डाटा रेकर्ड गर्छ भने सीभीआरले ककपिटमा पाइलटहरुको कुराकानीदेखि त्यहाँको आवाज रेकर्ड गर्छ ।